kid – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
ဂနာမငြိမ်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ် (၃)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) “ထိုင်ပါ ကေသီ” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်း ဂျွန်ပါ” “တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ အခုလို လာရောက်တွေ့ဆုံလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပီတာရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စမ်းသပ်ထားတာတွေ ရရှိပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်က သာမန်အဆင့်ရှိတယ်။...
လေးနှစ်အရွယ်ကလေးမလေးက ဘာသာစကား ၇ မျိုး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှာ အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ဘယ်လာ ဒီယက်ထကီနာက ဘာသာစကား ခုနစ်မျိုးကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ မော်စကိုမှာနေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်က အံ့သြဖွယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြိုင်ပွဲ (Incredible)မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊...
ငါးကြေးဆီတစ်နေ့ ၁၀ လုံးစားနေတဲ့ကလေး . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး ။ ။ ကလေးက အသက်တစ်နှစ်လေးလပါ။ ငါးကြေးဆီကိုတစ်နေ့ ၁၀လုံးလောက်ဝါးစားနေလို့ အန္တရာယ်ရှိပါသလား သိချင်လို့ပါ။ ကြူကြူ၊ အလုံ။ ဖြေ ။ ။ ငါးကြေးဆီစားတယ်ဆိုတာက ကောင်းကျိုးလေးတွေ ရစေချင်လို့ပါ။ အသက် တစ်နှစ်လေးလအရွယ်က ဒီလောက်အများကြီး...
ချူချာတတ်သည့် ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ချူချာတတ်တဲ့ကလေးတွေကို မိဘတွေကဘယ် လို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာ ချူချာတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကမတူညီပါဘူး။ တချို့ ကလေးတွေကျတော့...
သင့်ကလေးက ဘယ်သန်ဖြစ်နေခဲ့လျှင် . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ညာသန်တွေအတွက်ချည်း သီးသန့် ပြုလုပ်တီထွင်ထားတဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဘယ်သန်တွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၇-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာဘယ်သန်တွေဖြစ်ကြပြီး ဘယ်သန်အများစုက အမျိုးသားတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ (ဥပမာ- အင်ဂျလီနာဂျိုလီ) ဘယ်သန်ဖြစ်ရင် ပိုပြီး...
ကလေးက အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ဖခင်နဲ့အတူအိပ်ရတဲ့အခါ…
မေး ။ ကလေးကို အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ဖခင်နဲ့ အတူသိပ်ပါတယ်။ ကလေးရှေ့မှာ သောက်တာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဖခင်ရဲ့ကိုယ်နံ့မှာ အရက်နံ့၊ ဆေးလိပ်နံ့ကစွဲနေပါတယ်။ ကလေးကလည်း အသက်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတော့ ကလေးထိခိုက်မှာ စိုးမိပါတယ်။ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ မလေးခင်၊ နေပြည်တော်။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး(ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း...
၊ ကိုထက် ၊ ကလေးငယ်တွေကို မူကြိုစထားတဲ့ရက်တွေနဲ့ ကျောင်းစပို့တဲ့ရက်တွေမှာ ကလေးငယ် အများစုဟာ သူစိမ်းတွေနဲ့မနေလိုတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်အနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းကင်းနဲ့ ပညာသင်နိုင်ဖို့ လူကြီးမိဘတွေ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ကလေးကို နံနက်စာပြည့်ဝစွာ ကျွေးပါ...
မေမေ နားလည်ပြီ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ခွမ်း . .ခွမ်း” ပန်းကန်ကွဲတဲ့ အသံတွေကြားလို့ မသင်းသင်းနွဲ့ မီးဖိုထဲ ပြေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နှစ်နှစ်ခွဲအရွယ် သမီးလေး ဆုမွန်ကျော်က မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရထားတဲ့ ပန်းကန်လုံးအလှလေးတစ်လုံးနဲ့ ပန်းကန်းပြားလေးတစ်ချပ်ကို လက်နောက်ပစ်ကာ ခွဲပြီးသွားပြီ။ မသင်းသင်းနွဲ့ မျက်စိထဲ...
ဂနာမငြိမ်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ် (၂)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာာ မိခင်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့တာ၊ တုပ်ကွေးရောဂါလို ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တဲ့ ရောဂါ ခံစားရတာ၊ မိခင်အာဟာရ ချို့တဲ့တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေတွေက သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လမစေ့မီမွေးဖွားပြီး ကိုယ်အလေးချိန်နည်းတဲ့...
ကလေးဖျားပြီဆိုလျှင် . . .
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ကလေးဖျားပြီဆိုရင် မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေအနေ နဲ့ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ ကလေးဖျားပြီဆိုရင် မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်သူတွေ သတိထားသင့်တာက...